March midnimo ayaa ka dhacday Sioux City galabta | KWIT
Siouxland Public Media News: Somali
March midnimo ayaa ka dhacday Sioux City galabta
By Halima Osman • Jun 5, 2020
March midnimo ayaa ka dhacday Sioux City galabta.
Waxay ka bilaabatay Cook Park iyada oo lagu qiyaasey dad aad u tiro yar oo dhawr boqol ah.
Kadib kooxdu si nabad ah ayey ugu lugeeyeen Saldhigga Booliska Magaalada Sioux.
Waxaa ku weheliyay taliyaha bilayska Rex Mueller iyo hoggaamiyeyaal kaniisadaha maxalliga ah iyo NAACP.
Mueller wuxuu u sheegay dadkii badnaa "Wixii ka dhacay Minneapolis, taasi maahan."
Booliska Magaalada Sioux ayaa baaraya toogashadan subaxnimadii taas oo ku dhammaatay tuhmanihii oo baxsaday.
Waxay ka dhacday qiyaastii sideedaba meel u dhow 24-kii iyo Clark Streets, oo ah meel ku dhow Floyd Boulevard.
Qof ayaa rasaas ku furay gaari uu wadey. Gaariga ayaa markaa ku dhuftay tiir. Saraakiishii goobta ka dhawaa ayaa eryaday ninkii tuhunsanaa inuu baxsaday.
Darawalka wax rasaas ah kuma dhicin, laakiin waxaa ku soo gaadhay dhaawac fudud shilka.
Darawalka ayaan gacansaar la yeelan doonin baaritaanka.
Booliisku waxay rumeysan yihiin inay yaqaanaan aqoonsiga tuhmanaha waxayna hada raadinayaan
Agaasimaha Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu sheegay in COVID-19 ay u muuqato in ay heer ka sareyso Woodbury County.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu leeyahay saameynta dhabta ah ee furitaanka inbadan oo ka mid ah gobolka ma dhici doono illaa dhammaadka usbuuca soo socda sababta oo ah waxay qaadataa waqti in astaamaha soo muuqdaan.
Hogaamiyaasha labada isbitaal ee Sioux City waxay leeyihiin tirada bukaanada lagu daweeyo tas-hiilaadkooda ayaa sii dhacaya. Si kastaba ha noqotee, waxay ku boorinayaan dadka inay wali xirtaan waji xidho oo ay ka taxaddaraan kahortaga faafitaanka cudurka.
Dhanka kale, Gobolka Woodbury wuxuu ku daray 27 kiis oo cusub oo ah COVID-19 oo loogu talagalay in ka badan 2,800 infekshannada.
Degmada Dakota waxay aragtay kiisas cusub oo cusub in kabadan 1,700. Waxaa jiray wadarta guud ee dhimashada 64 ka mid ah aagga mitrooga ee magaalada'ioioio 'sababo la xiriira Covid-19 dhibaatooyinka ka dhashey awgeed.
Dad lagu qiyaasay 300 oo qof ayaa si wada jir ah ugu soo wada duulay nabadaynta iyo bogsiinta
By Halima Osman • Jun 4, 2020
Dad lagu qiyaasay 300 oo qof ayaa si wada jir ah ugu soo wada duulay nabadaynta iyo bogsiinta magaalada Sioux City galabnimadii Khamiista ka dib geeridii George Floyd ee Minneapolis.
Hoggaamiyeyaasha fulinta sharciga maxalliga ah, iyo wakiillo ka socda Midnimada bulshada iyo NAACP ayaa ka soo qayb-galay munaasabaddii Midnimada ee Salaadda.
Sharci-dajiyayaashu waxay ku soo noqdeen Itowa State Capitol maanta si ay u dhammaystiraan shaqadii
Sharci-dajiyayaashu waxay ku soo noqdeen Itowa State Capitol maanta si ay u dhammaystiraan shaqadii ka hadhay markii uu COVID-19 faafidda dib u soo laabtay bishii March.
Ganacsigooda ugu weyn? Wax ka qabashada miisaaniyaddan xilligan degenaansho la’aanta dhaqaale.
Saraakiisha doorashada Gobolka Woodbury ayaa sheegaya in 30% ay soo xaadireen doorashadii Talaadada. Taasi waxay dejineysaa rikoor waqti walba ah oo loogu talagalay doorashooyinka aasaasiga ah.
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay inay tixgelin doonaan fikradaha hoggaamiyeyaasha
By Halima Osman • Jun 3, 2020
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay inay tixgelin doonaan fikradaha hoggaamiyeyaasha maxalliga ah ka hor inta aysan u yeerin caawimaad dheeri ah oo ku saabsan boobka iyo rabshadaha. Waxaa dalka ka dhacay mudaharaadyo lagu dalbanayo in wax laga baddalo ka dib dilkii booliisku u gaystay George Floyd todobaadkii hore.
Waxaa jiray seddex habeen rabshado ah oo ka dhacay Des Moines dilkii booliis ee George Floyd
By Halima Osman • Jun 2, 2020
Waxaa jiray seddex habeen rabshado ah oo ka dhacay Des Moines dilkii booliis ee George Floyd ee Minneapolis. Maanta, Iowa Gov. Kim Reynolds waxay sheegtay inay la shaqeyneyso NAACP si loo baddalo nidaamka cadaaladda dambiyada si loo yareeyo cunsuriyada iyo qalalaasaha loo geysto dadka Mareykanka Afrikaanka ah.
Shir jaraa'id galabnimadan, Gov. Reynolds waxay sheegtay inay rabto inay la shaqeyso u doodayaasha cadaalada bulshada si looga hortago dhimashada naxdinta badan. Betty Andrews waa madaxweynaha laanta Iowa-Nebraska ee NAACP.